ဒီပလိုမေစီဓာတ်တိုင်ကို လက်ဝဲရစ်ပတ်ပြီး တရားမှတ်နေကြတယ်...
အရိပ်မှာနေပြီး အခက်ကိုချိုးတဲ့ ဓားပြသူခိုးတွေနဲ့အတူတူပဲ....
ကျန်တာ”I don't know” ငါမသိဘူးတဲ့....
နိုဝင်ဘာ၇ရက်နေ့မှာ မဲပုံးတွေထောင်ထားမယ်တဲ့ ...
၄၈နှစ်တာ မီးလောင်ပြာကျနေရတဲ့ မြန်မာ့အရေးမှာ
”အတ္ထ္ထ္ထာဟိ အတ္ထနော နာထော”တဲ့
တဦးချင်းစီရဲ့ ကျောက်ရိုင်းတုံးတွေကို ကိုယ်တိုင်သွေးယူကြလို့
အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်တွေကိုလည်း မွေးမြူကြဖို့လိုတယ်...။ ။
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 9:18 PM
သိပြီး မပြောတတ်တဲ့ အသုံးတွေကို အစ်ကို့ ကဗျာ မှာတွေ့လိုက်တယ် အစ်ကိုရေ ...
ကိုယ်တိုင်ရော တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီရေးတွက်လုပ်နေတာလား? ကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်မှာ မရှိပဲ မလုပ်နိုင်ပဲ ဘာလို့သူများတကာကို တိုက်တွန်းနေရတာလဲ?ကုလ ကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတော့ ကုလရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပဋိဥာဏ်ထဲက စည်းကမ်းတွေက ဘယ်လိုလည်းဆိုတာရော နားလည်ထားပြီးပြီလား? အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကိုဝေဖန်သေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သံတမာန်မူတွေဘောင်တွေ စည်းကမ်းတွေကို နားလည်ထားပြီးပြီလား...
အာဆီအဖွဲ့ဝင်ထဲက နိုင်ငံအချင်းချင်းတွေထားရှိချုပ်ဆိုထားတဲ့ ပဋိဥာဏ်တွေကို သိရှိနားလည်သလား?
ဘာမှမသိပဲ အပေါ်ယံသူများတွေကို ဘာလို့အပြစ်တင်နေတာလဲ...အဲဒီ ကုလ တို့ နိုင်ငံတာတို့က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်တဲ့တွက် သူတို့က အကြံပေးယုံကလွဲလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး...လက်တွေ့လုပ်ရမှာက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ပဲ...
ဒါကိုသိရဲ့နဲ့မိမိအပြစ်ကိုဖုံးကွုယ်ပြီး သနားသောအားဖြင့် ကုလတို့နိုင်ငံတကာတို့က သူတို့လုပ်ပေးနိုင်သလောက်လုပ်ပေးနေတာကို ဘာတွက်နဲ့အပြစ်တင်ချင်နေတာလဲ၊?
anonymous ရဲ့ ကွန်မန့်ကို သဘောကျတယ်ဗျာ။